Shiinaha FK-Q600 Hand qabtay warshad soo saare jawiga Agrometeorological caqli iyo soo saarayaasha | Chuanyunjie
• kala duwanaanta cabbirka heerkulka ciidda: - 40-120 ℃ saxnaan: ± 0.2 ℃ xallin: 0.01 ℃
Heerka cabbirka qoyaanka ciidda: 0-100% saxnaan: resolution 3% xallin: 0.1%
• kala duwanaanta cusbada ciidda: 0-20ms sax: resolution 2% xallinta: ± 0.1ms
• ciidda qiyaasta cabirka pH: 0-14 saxnaanta: resolution 0.2 qaraarka: 0.1
Qoto dheerida cabbirka cabiraadda isugeynta: 0-450mm baaxadda: 0-500kg; Xaqiiqda 0-50000kpa: kg, 0.5kg cadaadis: 50kp
• kala duwanaanta heerkulka hawada: - 30 ～ 70 ℃ saxnaanta: ± 0.2 ℃ xallinta: 0.01 ℃
• kala duwanaanta huurka hawada: 0-100% saxnaanta: ± 3% xallinta: 0.1%
Xaddiga xoogga iftiinka: 0 0 200klux sax: ± 5% xallin: 0.1klux
• baaxadda cabbirka kaarboon laba ogsaydhka: 0-2000ppm saxnaanta: ± 3% xallinta: 0.1%
Nooca shucaaca wax ku oolka ah ee sawir-qaadaha ah: 400-700nm xasaasiyad: 10-50 μ V / μ mol · m-2 · S-1
• baaxadda cabbirka xawaaraha dabaysha: 0-30m / s saxan: ± 0.5% xallin: 0.1m / s
• baaxadda cabbirka jihada dabaysha: 16 tilmaamood (360 °) saxan: ± 0.5% xallin: 0.1%:
• Qiyaasta cabirka roobka: 0 .. 01mm ～ 4mm / min sax: ≤ ± 3% xal: 0.01mm
• habka isgaarsiinta: USB, fiilooyin RS485, wireless iyo GPRS
• fiilo: 2m silig gaashaan oo heer qaran ah oo biyo ah, 2m siligga polytetrafluoroethylene heerkulka sare ee silig u adkaysta.
• habka cabirka: geli nooca, nooca la aasay, astaanta, iwm
• qaabka korantada: batteriga lithium
• Qalabka GPS iyo GPRS waa lagu dari karaa
Hawlaha iyo astaamaha
(1) Codka, GPS-ka, GPRS-ka xog-ururinta iyo shaqooyinka kale waa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha;
(2) Naqshadeynta awoodda hooseysa, kordhinta howlaha dib-u-dejinta ilaalinta nidaamka, ka hortagga wareegga gaaban ee korantada ama dhaawaca faragelinta dibedda, ka fogow shilka nidaamka;
(3) LCD wuxuu soo bandhigi karaa waqtiga hadda jira, dareeraha iyo qiimaha la cabiray, awooda batteriga, heerka codka, xaalada GPS, xaalada shabakada, xaalada tfcard, iwm;
(4) Awoodda batroolka weyn ee lithium ee korantada laga helo, iyo bateriga oo siyaado ah iyo ka hortagga dheecaanka;
(5) Qalabka waxaa lagu soo dallacayaa koronto gaar ah, qeexitaanka adaptarka waa 8.4v / 1.5a, oo inta buuxda ee lacagta la qaadanayaa waxay qaadataa ilaa 3.5H; inta lagu guda jiro amarka, adabtarada waa casaan oo lacag buuxda ayaa cagaaran.
(6) Isku xirka USB waxaa loo adeegsadaa inuu kula xiriiro kumbuyuutar, kaas oo dhoofin kara xogta isla markaana habeyn kara xuduudaha
(7) Kaydinta xogta awoodda badan, qaabeynta TF Card keydinta xogta aan xadidnayn;
(8) Dejinta alaarmiga ee xuduudaha macluumaadka deegaanka waa mid fudud oo dhakhso leh;
(9) Iskuxirku wuxuu leeyahay ikhtiyaar gacan-ku-dhigid / dushan ah GPRS;
Waxaa si weyn loogu adeegsadaa beeraha, keymaha, ilaalinta deegaanka, dhowrista biyaha, warshadaha saadaasha hawada, waraabka biyaha lagu keydsado dhulka qalalan, sahaminta cilmiga dhulka, beerashada dhirta iyo beero kale.
Hore: YMJ-B qalabka wax lagu baaro ee la qaadan karo
Xiga: FK-CT10 Sunta cilmiga nafaqada carrada
Qalabka Kormeerka Saadaasha Hawada
Saldhigga Cimilada Yar
Saldhigga Cimilada Ultrasonic
Qalabka Dabagalka Saadaasha Hawada Ultrasonic
Qalabka Dabagalka Cimilada
Astaamaha waxqabadka 1. Naqshad heer sare ah oo isku dhafan, marti-geliyaha isku-dhafan ee isku-dhafan, 4G isgaarsiinta xogta wireless-ka, fiilada indhaha iyo isgaarsiinta fiilada shabakadda. Waxay sidoo kale si toos ah u soo saari kartaa calaamadaha borotokoolka 'MODBUS 485', oo loo isticmaali karo inay tahay dareemayaal cabbiraad badan oo ku xiran isticmaalaha PLC / RTU iyo kuwa kale ee wax soo uruuriya. 2. Waxay la socon kartaa xawaaraha dabaysha deegaanka, jihada dabaysha, heerkulka hawada, qoyaanka hawada, dhibic sayaxa t ...